Etazonia: fifandonana tamin’ny polisy nandritra ny fihaonambe G-20 tao Pittsburgh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2018 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, македонски, 繁體中文, polski, 简体中文, English
Anti-kapitalista, vondrona tsy tia ady, anarshista (mpandala ny fanjakan'i Baròa), vondrona mpiaro ny tontolo iainana, ary ireo olom-pirenena miahy no nivory tao Pittsburgh, Pennsylvanie tamin'ny Alakamisy 24 septambra mba hanohitra ny fiantraika ratsy ny kapitalisma manerantany nandritra ny Fihaonambe G-20 an'ireo mpitarika manerana zao tontolo izao.
Ahitana mpitarika 19 avy amin'ireo firenena manankarena indrindra manerantany sy ny solotenan'ny Vondrona Eoropeana ny G-20. Ny Filoha Obama no mampiantrano ny fivoriana amin'ity taona ity, ary ny lohahevitry ny fifanakalozan-kevitra dia ny krizy ara-toekarena eran-tany. Milaza ireo mpitsikera fa tsy demaokratika sy mangingina ny fivoriana. Anisan'ny fitakiana miverimberina mahazatra ny fametrahana “ny vahoaka alohan'ny tombontsoa”.
Nivezivezy sy nibilaogy ny lalan'izy ireo manerana ny fanjakan'i Pennsylvania alohan'ny fihaonambe ny vondrona iray izay miantso ny tenany ho The Peoples Caravan Across Pennsylvania (Ny Valalamanjohin'ny Vahoaka Manerana an'i Pennsylvania), manasa ireo mpanohana mba hanatevin-daharana azy ireo amin'ny diabe any Pittsburgh. Nanomana tatitra am-peo ahenoana ny olona nihaona tamin'izy ireo manerana ny lalana izy ireo, mamariparitra ny fahasahiranan-dry zareo ara-toekarena.
Nosamborina tao Pittsburgh. Sary Creative Commons avy amin'i mpisera Flickr america.gov
Notsenain'ny polisy misahana ny rotaka nampiasa baomba mandatsa-dranomaso, tifitra sakay, bala fingotra sy fanakanana feo ireo mpanao hetsi-panoherana. Manodidina ny 19 ireo mpanao fihetsiketsehana nosamborina tamin'ny alakamisy. Fihetsiketsehana fanampiny no nomanina ny zoma 25 septambra, araka ny vaovao navoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Tetikasa Fifaharana manoloana ny G-20 ao Pittsburgh.
Mitantara ny zava-nitranga tamin'ny alàlan'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra, tahaka ny onjam-peo, ny seraseran'ny twitter, ny finday ary ny tatitra an-dahatsary ny tetikasa G-Infinity, Pittsburgh Indymedia. Manaraka ny fifandonana amin'ny polisy ao amin'ny sarintany Google ihany koa izy ireo izay mampiseho ny zava-mitranga manerana ny tanàna.
Mampiseho ny fankalazana eo amin'ireo olona samihafa izay niseho tao amin'ny fihetsiketsehana tamin'ny faha-24 izay nantsoina hoe ny Fitroaran'ny vahoaka ny lahatsary Youtube manaraka avy amin'ny Soul Pitt TV, fantsona tantanin'ny tranonkalan'ny vondrom-piarahamonina afrikana-amerikana any Pittsburgh:
Soul Pitt TV mamariparitra ny lahatsary:
Lahatsary misy ireo mpanao hetsi-panoherana ny G20 raha nandao ny Zaridaina Arsenal tao Lawrenceville tao amin'ny (fihaonan-dalan'ny) faha-40 sy Penn izy ireo ary nidina nankany afovoan-tanànan'i Pittsburgh mba hanohitra ny fihaonambe G20. Indrisy fa dia tsy nahahoatra ny làlana faha-34 izy ireo satria nandefasana etona mandatsa-dranomaso ary voatery niverina tany amin'ny zaridaina ny vahoaka
Mpisera YouTube thetwos nandefa lahatsary maromaro, anisan'izany ny eto ambany, izay nofaritan'i Marc Parent (@mparent77772) sy ny maro hafa ao amin'ny Twitter ho “feo fitaovam-piadian'ny miaramila”. Nilaza ny lahatsoratry NYTimes fa ity no fotoana voalohany nampiasàna tafondrom-peo hifehezana ny vahoaka ao Etazonia.
Ho fiarovana ny zo sivily
Manangona ireo fitarainana amin'ny fampiharana ny lalàna manodidina ny G-20 ao amin'ny tranonkalan'izy ireo ny Sendikan'ny Zo Sivily Amerikana.
Manana telefonina fiantso malalaka ihany koa ny ACLU izay manome fanohanana ara-pitsarana ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana eny ifotony satria mety ho voahitsakitsaka ny zon'izy ireo hanao fivoriana milamina. Milaza ny mpitandro filaminana fa maro amin'ireo hetsi-panoherana no “fivoriana tsy ara-dalàna” ary milaza koa ny mpikarakara ny fihetsiketsehana voalohany fa nanaraka ny fenitra ofisialy izy ireo tamin'ny fahazoana fahazoan-dalana. Nitory ny governemantan'ny tanàna mihitsy aza ny ACLU ao Pennsylvanie noho ny fanerena azy ireo hamoaka fahazoan-dàlana ho an'ny vondrona maromaro.